Kooxda Hoggaanka Fulinta - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Nagu saabsan|Kooxda Fulinta
Kooxda Hoggaanka Fulinta
Lisa J. Brown, Ph.D., waxaa magacaabay agaasimaha ganacsiga ee Gov. Inslee wuxuuna bilaabay inuu u adeego hay'adda bishii Febraayo ee 2019.
Lisa waxay muddo dheer deganayd magaalada Spokane. Kahor intaanay noqonin agaasimaha ganacsiga, waxay usoo shaqeysay gudoomiye jaamacada Washington State University waxayna hogaaminaysay xarunta sayniska caafimaadka halkaas, oo ay kamid tahay abuuritaanka kuliyada caafimaadka ee Elson S. Floyd. Lisa waxay wakiil ka ahayd aagga Spokane ee Aqalka Dawladda laga soo bilaabo 1993-1996 iyadoo ahayd jeedal laga tirada badan yahay iyo hoggaanka dabaqa laga tirada badan yahay, iyadoo jabisay dhulkii hooyo keli ahayd. Kadib waxay u gudubtay aqalka Senate-ka halkaas oo ay ka noqotay haweeneydii ugu horreysay ee hoggaamiye aqlabiyad ah ee dimoqraadi ah waxayna shaqeysay illaa 2013.
Lisa waa aqoonyahanad dhanka dhaqaalaha ah waxayna wax ka dhigtay Jaamacada Bariga Washington iyo Gonzaga University. Waxay ku qaadatay shahaadada koowaad ee cilmiga dhaqaalaha ee Jaamacadda Illinois iyo sayidkeeda iyo shahaadada dhakhaatiirta ee Jaamacadda Colorado ee Boulder. Waxay inbadan ka shaqaysay dadaalada shaqo abuurka iyo taageerida qoysaska ka shaqeeya guud ahaan gobolka Washington. Labadeeda mudnaan ee ugu sarreeya, iyada oo aan loo kala horrayn si gaar ah, ayaa ah dib-u-soo-kabasho dhaqaale oo loo siman yahay oo waarta iyo ilmaheeda uu dhalay, Blaze.
Shaqaale dowladeed in ka badan 20 sano, Kendrick Stewart wuxuu ku laabtay Ganacsiga bishii Febraayo 2020 si uu u hoggaamiyo howlaha gudaha ee hay'adda. Wuxuu kormeeraa Kheyraadka Aadanaha, Awoodda Urur, isgaarsiinta gudaha, halista iyo maareynta xaaladaha degdegga ah, amniga, xisaabinta gudaha, iyo kala duwanaanta, sinnaanta, ka mid noqoshada iyo ixtiraamka shaqada. Diiradiisu waxay ku xiran tahay gaaritaanka iyo joogtaynta heer sare ee hawlgalka iyo caawinta shaqsiyaadka iyo kooxaha.
Kendrick wuxuu jecelyahay barashada waxa kiciya dadka, wada shaqeynta xalinta dhibaatooyinka iyo adeega. Wuxuu u heellan yahay dhismaha bulshada wuxuuna ku hamiyaa inuu hubiyo dhammaan shaqaalaha Ganacsigu inay dareemaan in lagu qiimeeyo cidda ay yihiin.
Wuxuu haystaa shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee farshaxanka ee Jaamacadda Colorado State University iyo mastarka shahaadada maamulka dadweynaha ee Jaamacadda Washington.
Ka maqnaanshaha shaqada, Kendrick wuxuu ku raaxeeyaa ciyaarista kubbadda koleyga, dhageysiga muusikada, socodka, akhriska, iyo xiriirinta qoyska iyo asxaabta.
Kaaliyaha Agaasimaha, Qeybta Dowlada Hoose
Mark wuxuu la shaqeynayay Waaxda Ganacsiga illaa 2013 wuxuuna hadda u shaqeeyaa kaaliyaha agaasimaha Qeybta Dawlada Hoose. Mas'uuliyadaha Mark waxaa ka mid ah isku dubaridka Guddiga Hawlaha Guud iyo Guddiga Dib-u-nooleynta Bulshada iyo Dhaqaalaha (CERB) Isaguna wuxuu kormeerayaa Deeqaha Hor-u-marinta Bulshada, Cabbitaanka Sanduuqa Dib-u-Celinta Biyaha ee Gobolka, Brownfields Round Revolving Fund iyo Adeegyada Maareynta Kobaca. Wuxuu leeyahay khibrad 20 sano ka badan oo uu kula shaqeynayay qandaraasyada gobolka iyo federaalka. Markuu 25 sano ka shaqeynayay Ciidanka Mareykanka, Mark wuxuu labo sano ka shaqeynayay Waaxda Gaadiidka ka hor inta uusan imaanin Ganacsiga. Wuxuu haystaa shahaadada koowaad ee cilmiga dhaqaalaha ee Jaamacadda Seattle iyo shahaadada labaad ee maamulka dadweynaha ee Jaamacadda Central Michigan. Mark wuxuu degan yahay Rainier xaaskiisa iyo caruurtiisa.
Kaaliyaha Agaasimaha, Qeybta Tamarta
Michael Furze waa kaaliye agaasime waaxda ganacsiga ee Gobolka Washington, halkaas oo uu madax uga yahay xafiiska Tamarta ee Gobolka. Xafiiska hogaaminaya u-gudubka gobolka Washington ee mustaqbal nadiif ah oo cadaalad ah iyada oo loo marayo hoggaanka siyaasadda, maalgelinta tikniyoolajiyadaha nadiifka ah, qorsheynta iyo ka jawaabista xaaladaha degdegga ah ee tamarta, iyo ballaarinta helitaanka sinnaanta tamar nadiif ah. Shaqadani waxay xoojineysaa bulshada, sidaas darteed dadka degan Washington waxay ku kobci karaan dhaqaale tamar nadiif ah, la awoodi karo oo loo siman yahay.
Furze sidoo kale waxay u shaqeysaa Guddiga Sare ee Ururka Qaranka ee Saraakiisha Tamarta Gobolka. Wuxuu haystaa shahaadada mastarka ee qorsheynta bulshada iyo gobolka iyo shahaadada qalin-jabinta ee naqshadeynta magaalada oo ka socota Jaamacadda New Mexico.
Markii aan diirada la saarin shaqadiisa tamarta, Furze iyo qoyskiisa waxay si dulqaad leh u sugaan in qorraxdu mararka qaar ka soo baxdo daruuraha iyo roobka Woqooyi Galbeed ee Baasifigga.
Kaaliyaha Agaasimaha, Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartan
Chris wuxuu ku soo biiray Waaxda Ganacsiga sanadkii 2015 isagoo ahaa kaaliyaha agaasimaha xafiiska horumarinta dhaqaalaha iyo tartanka, oo ay ku jiraan ganacsiga caalamiga ah, qorista / haynta ganacsiga iyo unugyada horumarinta dhaqaalaha miyiga. Chris wuxuu horey ushaqeeyay mudo XNUMX sano ah madaxweyne kuxigeenka ganacsiga haynta iyo balaarinta Golaha Horumarinta Dhaqaalaha ee Gobolka Tacoma-Pierce. Intaas ka hor, wuxuu ka shaqeeyay xiriirka dowladda wuxuuna ka mid ahaa shaqaalaha dhowr xubnood oo la soo doortay, oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan hore oo Mareykan ah Norm Dicks, Duqa magaalada Seattle Ed Murray iyo Koongaraska Mareykanka Derek Kilmer. Chris wuxuu ka qaatay shahaadada koowaad ee cilmiga siyaasada jaamacada Pacific Lutheran University iyo MBA ee jaamacada Washington. Isaga iyo xaaskiisa Shannon waxay ku nool yihiin Tacoma iyaga iyo saddexdooda carruurta ah.
Kaaliyaha Agaasimaha, Adeegyada Bulshada iyo Qeybta Guryeynta
Diane waxay ku soo biirtay Waaxda Ganacsiga 2001 waxayna hadda u adeegtaa kaaliye agaasime waaxda Adeegyada Bulshada iyo Guryeynta. Waxay shaqadii dawladnimo bilawday 1994. Diane waxay siisaa hogaaminta dadaallada istiraatiijiyadeed ee Ganacsiga si wax looga qabto baahiyaha dadka nugul iyo kuwa dakhligoodu hooseeyo ee ku nool bulshada gobolka oo dhan.
Sooyaalkeedii hore waxaa ka mid ah taariikh adag oo guul leh oo ku saabsan maamulka barnaamijka, horumarinta siyaasadda, shaqada u janjeedha natiijooyinka, iyo la shaqeynta iskaashi lala yeesho shaqaalaha, la-hawlgalayaasha bulshada, shakhsiyaadka iyo qoysaska gobolka oo dhan si loo xoojiyo bulshada. Diane waxay ka heshay shahaadada bachelor-ka ee cilmu-nafsiga Jaamacadda Washington State.
Waxay u adeegtaa sidii magacaabista guddoomiyaha ee 'Serve Washington', waxay u adeegtaa Golaha Wada-tashiga ee Guddoomiyaha ee Kala-duwanaanta Caafimaadka, waxay u adeegtaa xubin iyo ku-xigeen hore iyo guddoomiye Golaha latalinta waxbarashada dadka waaweyn, wuxuu u shaqeeyaa gudoomiye ahaan Gudiga Dhaqaalaha Guriyeynta ee Gobolka Washington, isla markaana wuxuu Wada-hogaamiyaa Kooxda yareeynta Saboolnimada Gudoomiyaha Gobolka si loo kala qaado Saboolnimada Diane waxay sidoo kale horey uga soo shaqeysay guddiga maamulka ee Jaaliyada Washington Dib-u-maalgelinta Waxay heshay Abaalmarinta Gudoomiyaha 2013 ee Hogaaminta Maamulka.
Agaasimaha Siyaasadda iyo Qorshaynta
Cheryl Smith waa Agaasimaha Waaxda Ganacsiga iyo Wacyigelinta ee Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington, halkaas oo kooxdeeda ay ka caawiso bulshooyinka inay wax ka qabtaan baahiyaha mudnaanta leh iyada oo loo marayo caawimaad farsamo, hagidda barnaamijyada maalgelinta, iyo u doodista. Waxay sidoo kale bilaabaan mashaariic hal abuur leh iyo dadaallada horumarinta siyaasadda ee hormarinta himilada Ganacsiga ee xoojinta bulshada, oo ay ku jiraan dadaalada ku saabsan daryeelka carruurta iyo sinnaanta.
Cheryl waxay leedahay taariikh dheer oo raad raac ah oo horseedaysa dadaallada iskaashiga ee gobolka iyo dowladda hoose si wax looga qabto arrimaha iyo fursadaha adag. Waayo-aragnimadeeda waxaa ka mid ah maalgelinta kaabayaasha maxalliga ah, ilaalinta deegaanka, qorsheynta bulshada iyo is-caawinta, barnaamijyada deeqaha iyo amaahda, hagaajinta nidaamka iyo dhowr dadaal oo lagu hormarinayo sinnaanta.
Iyadu waa Phi Beta Kappa oo ka qalin jabisay Jaamacadda Kansas State, oo leh Bachelor of Arts ee sayniska siyaasadda iyo cilmiga bulshada, iyo Master of Public Administration. Waxay sidoo kale haysataa dhowr shahaado oo shaqsiyadeed oo shaqsiyeed waxayna u aragtaa nafteeda inay tahay arday cimri dheer.
Cheryl waxay jeceshahay inay saaxiib la noqoto dadka oo dhan. Waxay qaddarinaysaa la shaqaynta kooxda hibada leh ee Ganacsiga waxaana dhiirrigeliya dad ka kala socda qaybaha kala duwan ee nolosha kuwaas oo u heellan ka dhigaya bulshada Washington kuwo firfircoon. Beerista Michigan, Cheryl waxay ku nooshahay Olympia iyada iyo qoyskeeda waxayna ku koray inay jeclaato Pacific Northwest Pacific, roob iyo dhammaan.
Madaxa Sarkaalka Maaliyadeed, Adeegyada Maamulka
Martin wuxuu ku soo biiray Ganacsiga sanadkii 2015 wuxuuna hogaamiyaa Qeybta Adeegyada Maamulka, oo ay ku jiraan xisaabinta, miisaaniyadda, qandaraasyada, tikniyoolajiyadda macluumaadka iyo adeegyada xafiisyada. Martin wuxuu bilaabay shaqadiisa gobolka 2001 shaqo ku meel gaadh ah oo qalabka kombiyuutarka ugu gudbinayay rugaha caafimaadka miyiga ee Waaxda Caafimaadka. Wuxuu tan iyo markii uu ka soo shaqeeyay siyaasado kala duwan iyo jagooyin miisaaniyadeed oo gobolka ah, si loogu daro ka shaqeynta Ganacsiga sanduuqa Aaminaadda Guriyeynta wixii ka dambeeyay 2006 halka uu ka dhammaysanayay shahaadada mastarka ee maamulka dawladda ee Evergreen State College. Kahor intuusan ku biirin Ganacsiga, Martin wuxuu maamule miisaaniyadeed u ahaa Waaxda Amniga Shaqada. Martin sidoo kale wuxuu haystaa shahaadada koowaad ee jaamacada Central Washington University waxaana badanaa laga helaa garoonka Olympia isagoo daawanaya labadiisa caruur oo ciyaaraya kubada cagta.
Jaime Smith wuxuu leeyahay ku dhowaad 20 sano oo isgaarsiineed, wacyigelin iyo khibrad siyaasadeed, in badan oo ka mid ahna wuxuu ku leeyahay dowladda gobolka. Waxay dhawaan soo noqotay agaasimaha fulinta ee isgaarsiinta iyo arimaha dibada Gov. Jay Inslee halkaas oo ay dusha kala socotey isgaarsiinta gudoomiyaha, adeegayada iyo kooxaha wacyigalinta. Waxay si kooban u tagtay si ay u furato shirkadeeda isgaarsiinta laakiin faafida COVID-19 ayaa dib ugu soo celisay dowlad goboleedkeedii halkaasoo ay ka soo noqotay maamule ka ah Xarunta Macluumaadka Wadajirka ah ee COVID-19 ee Camp Murray.
Jaime waa qof nool noloshiisa gobolka Washington wuxuuna ku nool yahay Tacoma. Waxay ka qalin jabisay Jaamacadda Washington.
Agaasimaha Sharci dejinta
Jasmine Vasavada waxay ku soo biirtay Ganacsiga sanadkii 2016 iyada oo ah khabiir ku takhasusay siyaasada tamarta waxayna bilowday inay u shaqeyso agaasimaha sharci dejinta ganacsiga ee 2018. Waxay ka heshay Juris Doctorate Jaamacadda Washington iyo bachelor-ka shahaadada sayniska ee Jaamacadda Harvard. Taariikhdaas sayniska ayaa caawisay markay bilowday inay ka shaqeyso arrimaha heer-gobol ee la xiriira sunta ka jirta New Jersey. Waxay usii gudbisay shaqadeeda Matxafka Santa Barbara ee Taariikhda Dabiiciga ah, halkaas oo Jasmine ay qortay oo ay tababartay koox ka kooban 60 mutadawiciin dabiici ah si ay carruurta u baraan sida loo ilaaliyo nolosha badda ee xarun cusub oo gacmeed lagu barto cilmiga badda. Intii ay sharciga ka baraneysay Jaamacadda Washington, Jasmine waxay diiradda saartay siyaasadda heer gobol waxayna bilo badan kula qaadatay Olympia xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo xafiiska cilmi baarista barnaamijka, shaqaalaha guddiga aan ka tirsaneyn ee ka tirsan Aqalka Wakiilada ee Gobolka Washington.